Iibinta Mashiinka Mashiinka Muraayadaha Iibiyeyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Alaab-qeybiyeyaal Mashiinka Muraayadaha Iibinta
Albaabka Qaboojiyaha Tooska ah / Qabalada Muraayadaha
Soco-in Qaboojiyaha / Qaboojiyaha Muraayadda Albaabka
Iibinta Albaabka Mashiinka Mashiinka
Laab Qaboojiyaha Albaabka Albaabka
Khamri Golaha Wasiirada Glass Door
Albaabka Muraayadda LED-ka
Custom Picture Daabacaadda Digital Daabacaadda Frameless Glass Glass ...
Aluminium Iibinta Aluminium Albaab Albaabka
YB Aluminium Iibinta Mashiinka Muraayadda Albaabku wuxuu adeegsanayaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarax-caddeyn adag oo leh muraayada hore ee baabuurta. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. YB Aluminium Iibinta Mashiinka Muraayadda Albaabka wuxuu dabooli karaa shuruudaha heerkulka ee 0 ℃ -25 ℃, goomaha leh magnet xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
Midabka Dahabka Mashiinka Mashiinka Muraayadda Albaabka
YB Dahaarka Midabka Mashiinka Mashiinka Muraayadda ah wuxuu adeegsanayaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarax-caddeyn adag oo leh muraayada hore ee baabuurta. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. YB Dahaarka Midabka Mashiinka Mashiinka Muraayadda Albaabku wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo 0 ℃ -25 ℃, goomaha leh magnetic xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
Midab Lacag Mashiinka Mashiinka Muraayadda ah
YB Silver Color Vending Mashiinka Muraayadda Albaabka wuxuu adeegsanayaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarax-caddeyn adag oo ah muraayada hore ee gaari. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. YB Silver Color Vending Machine Glass Door wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka 0 ℃ -25 ℃, goomaha leh magnetic xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
Jaangooyooyinka Mashiinka Mashiinka Muraayadaha Iridda
YB Standard Frame Vending Mashiinka Muraayadda Albaabka wuxuu adeegsanayaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarax-caddeyn adag oo ah muraayada hore ee baabuurta. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. YB Standard Frame Vending Mashiinka Muraayadda Door wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo 0 ℃ -25 ℃, goomaha leh magnetic xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
YB Vending Machine Glass Door waxay isticmaaleysaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarxin-caddeyn iyo adkeysashada muraayadda gawaarida. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. YB Vending Mashiinka Muraayadda Albaabku wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo 0 25 -25 the, goomaha leh magnet xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
Mashiinka Iibinta Lacagta Birta ah ee dhalaalaya
YB Shiny Silver Mending Machine Vending Glass Door waxay isticmaaleysaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarax-caddeyn adag oo leh muraayada hore ee baabuurta. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. YB Shiny Silver Silver Mashiinka Mashiinka Iridda Albaabku wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo 0 ℃ -25 ℃, goomaha leh magnet xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
5F. Lambarka 276, Qingyun Rd., Leidian Town, Deqing, Huzhou, Zhejiang 313219, China.